travelaustria Archives | Gcina A Isitimela
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ukuba uyazibuza apho yokufumana olondolozo lwembali best eYurophu, siye wawuzegquma! Nokuba kunjalo, ubuciko, yesizwe, okanye imbali yendalo, olondolozo lwembali ukusuka kuluhlu lwethu akayi kukuyekela ukuba mangaza kuwe. Kuthini okuthe vetshe, you can reach all these destinations by train…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu iihotele Historic eYurophu akukho emehlweni esinqabileyo, ingakumbi kwiidolophu ezinkulu nge ubutyebi bembali. Paris, London, eRoma, eMunich, Vienna - zonke ezi zixeko kufuneka iindawo ezithandekayo ukuba anikele. Tourists who crave some traditional luxury will have no difficulties finding a place…
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Ezi nangona bam phezu izitya lobulali elingcono kwendakha kwakumnandi, ngexesha kwami ​​e Austria. Ndandikho apho ehlotyeni 2016 ngenxa yam internship nyanga-4 kwi-NGO wengingqi amancinci ubungakanani. Amava internship waba mkhulu kangaka, that I got to meet talented…